हामी मास्क लुकाएर मानवता बेच्दैछौं - ट्विटर - साप्ताहिक
बैंकको ढोकैमा गार्डले हात थाप्नुसु बाजे भन्दै दुई थोपा सेनिटाइजर चुहाइदिएपछि बूढाले नारायण भन्दै सुरुप्प पारे । इति श्री नेपालखण्डे कोरोना महात्मे स्वाहा †
कोभिड–१९ विरुद्ध जनचेतना एवं सचेतना फैलाउन काठमाडौं मनपा १४ ले माइकिङ अभियान चलाउँदै रहेछ, गज्जब लाग्यो । नागरिकलाई घरभित्रै रहन, कुनैपनि सार्वजनिक समारोहमा नजान, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहिर निस्कनुपरे मास्क लगाउन र ह्याण्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्न अपिल गर्दैछ । सराहनिय काम ।
चाइनिज डाक्टर र नर्स आफ्नो मारेर इटली कोरोना नियन्त्रण गर्न तीन प्लेन चार्टर गरेर गए । अमेरिकामा आफ्नो ज्यान धरापमा पारेर कोरोना भ्याक्सिन टेस्ट गर्न जनता खुसी–खुसी तयार भए । तर, नेपाली व्यापारी मास्क र सेनिटाइजर लुकाएर कालो बजारी गर्दै मानवता बेच्दैछन् । वाह रे मेरो देश ।
ठूलो त पल्टेको होइन, तर कोरोनाको डरले न मास्क लाइया’छ, न नै किनिया छ । हात धुने, केही खानुअघि सेनिटाइजर हातमा लगाउने, हात, खुट्टा धोएर घर छिर्ने लगायतका बानी पुरानै थियो, अहिले नि यही गरिन्छ । कोरोना भाइरससँग डर नलागेको मलाई मात्र हो कि अरूलाई नि हो ?
बिहानदेखि बेलुकासम्म के–के गर्ने ? सबैभन्दा बढी हातको सरसफाइमा ध्यान दिने, काम गर्दा पटक–पटक सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर नभए साबुन पानीले हात धुने, शौचालय जाँदा र बाहिरबाट घर फर्केपछिट २० सेकेन्ड मिचीमिची हात धुने ।
सेनिटाइजर पनि आफ्नै स्वांग भयो, खरक्क साबुन पानीले हात धोए हुँदैन र ?
आङमा लुगा छैन, खुट्टामा ट्याक–ट्याक भने जस्तो । मास्क खोइ, सेनिटाइजर खोइ, भेन्टिलेटरको व्यवस्था खोइ ?
कोरोनाबाट जोगिन भुटान सरकारले सडकमा नै फ्री सेनिटाइजर वितरण गरिरहेको छ । हाम्रो देशमा ५ गुणा बढीमा कालोबजारी । देश, सरकार र जनताको चरित्रको मुख्य मापन गर्ने सूत्र यही हो ।
हामी न अहिलेका लागि अपडेट भयौं, न पुराना मान्छे रह्यौं । हाम्रा सुन पानी छर्कने, तितेपाती दल्ने, रक्सी छर्कने स्थानीय प्रचलन सकिए । ती लोकल सेनिटाइजर रहेछन् । अहिले पश्चिमा फर्मुलाअनुसार तालिम लिन्छौं । हाम्रो पूर्खा बाठा रहेछन्, भूत, प्रेत मन्साएको भन्दै कीटाणुबाट हामीलाई बचाउँदा रहेछन् ।
हिजो कुरा हुँदा सेनिटाइजर पाछैनम् बा भनेथें, आज पाँत्लिटर्का जर्किनाँ माली गाईको गौंत, एक्माना जति मन्तरेको खरानी र भक्याम्लाको लौरो पठाउनोअ रच । खाटलाई खरानीको घेरो लाएँ, सिरानी मुनि लौरो राखें । बेल्का सुन्ति बेलाँ एकुन्चम्चा गौंत खार सुतिन्च । त्यस्ता नाथे डर त छु मन्तर ।
अबदेखि मोबाइलमा पनि दुई चार थोपा सेनिटाइजर लगाउँदै पुछ्न पर्ने भो ।
मास्क लगाउँदा गाउँमा गोरुलाई मोला लगाएको याद आउँछ । अफिसको ढोकामा गार्डले सेनिटाइजर चुहाउँदा पूजामा पण्डितले पञ्चामृत दिएको सम्झना आउँछ । गर्नु गर्‍यो कोरोनाले पनि ।
चिउँडाँ मास्क ला’र र हाताँ सेनिटाइजर दलेसि कोभिड–१९ ले छुन्न भनेर लगभग नेपालीहरूले बुझिसके ।
आज पातलिएको मेरो ओपिडीमा पनि ५० वटा बिरामी थिए । कताको हात धुने, कताको हरेकलाई जाँचेपछि सेनिटाइजर, कता हरेक बिरामीपछि टेबल कुर्सी पुछाई ? सम्भव छैन । मानौं, विदेश रोक्नेमात्र होइन, बाहिरबाट आएका नेपालीलाई पनि क्यारेन्टाइनमा राख्नु कम खर्चिलो र सम्भव एकल उपाय हो । बुझेको बेस ।
Shukra Asta Nepali@Shukra_asta
कोरोनाबाट आफ्ना जनतालाई जोगाउन भुटानका प्रधानमन्त्री आफैं रोडमा बसेर जनतालाई सेनिटाइजर, साबुन सित्तैमा वितरण गरिरहेका छन् । आफैं डाक्टर भएका हुनाले सचेतना पनि दिइरहेका छन् । राजा भएको देश हो भुटान ।
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो विपत्ति नेपालीको तुच्छ बेहोरा हो । डेङ्गु हुँदा ओडोमस लुकाए । अहिले कोरोना आयो, मास्क लुकाए, सेनिटाइजर लुकाए । यहाँ रोगले भन्दा यस्ता नेपालीको बेहोराले मर्ने बढी डर छ मलाई ।
अतिरिक्त इन्धन जुवाड गर्ने प्रतिस्पर्धामा नलाऔं । मास्क, औषधि, सेनिटाइजर आदि सामग्री गोदाममा नथन्क्याऔं । रुखा, खोकी, मर्की लागेका व्यक्ति भीडभाड, सार्वजनिक ठाउँमा नजाऔं । फलानो चिज खाऔं, कोरोनाबाट जोगिउँ मार्काका तात्तो न छाराका समाचार लिंक सेयर नगरौं । कोरोनाको सन्त्रास न्यून गरौं ।
डब्ल्यूएचओको नियमअनुसर क्वारेन्टाइनमा बस्नुस् भनेको हो । यसको मतलब आइसोलेसन वार्डमा बस्नुस् भनेको होइन । म पनि क्वारेन्टाइनमा यसकारण छु । मास्क लागाउँछु, भीडभाडमा जाँदिन, हात साबुन–पानीले धुन्छु, सेनिटाइजर लगाउँछु अर्थात म कोरोनासँग सजग र सचेत छु । अफवाह नफैलाऔं । संकट हामी सबैको हो, यसको सामना गरौं ।
लुकायो, टेस्टै गरेन पो भन्छन् त हो । कोरोना भाइरस पनि लुकाउन सकिन्छ र भन्या । ए नेपालमा टेस्ट भा छैन । टेस्ट भएपछि देखिनु पर्ला भनेर कुरेर बस्या होला ! छक्कै पार्छन् हो । शंका पनि कतिसम्म क्या ?
एक चर्चित नायकले कोरोना नेपालमा नआउने ठोकुवा गर्नु भएछ मजाक मज्जाकमा । उहाँलाई के थाहा, उहाँको शुभचिन्तकहरू त्यसैलाई सिरियसली लिने खालका हुनुहुन्छ भनेर ।
B Ram Panthi@badsah48
कोरोनाको त्रास, मास्कको कालोबजार ।